'सरकारले निर्मला हत्या प्रकरणमा कुन दिन मेरो पनि डिएनए टेष्ट गर्न बेर छैन ?' : केसी (भिडियोसहित) | News Nepal
‘सरकारले निर्मला हत्या प्रकरणमा कुन दिन मेरो पनि डिएनए टेष्ट गर्न बेर छैन ?’ : केसी (भिडियोसहित)
काठमाडौं । राजनीतिक विश्लेषक प्रा.डा सुरेन्द्र केसीले देश गम्भिर मोडतर्फ गैरहेको टिप्पणी गरेका छन् । रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा स्वतन्त्र नागरिक समाजले पृथ्वीनारायण शाहको २९७ औं जन्मजयन्तीका अवसरमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै डा. केसीले यस्तो बताएका हुन् ।